Galmudug oo gacanta ku dhigtay rag lagu eedeynayo dil 4-ruux oo ka soo jeeda K/Galbeed loogu geystay Dh/mareeb - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
Galmudug oo gacanta ku dhigtay rag lagu eedeynayo dil 4-ruux oo ka soo jeeda K/Galbeed loogu geystay Dh/mareeb
Jun 17, 2019 - Comments off
Wararka lag helayo Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in howlgal ay kasameeyeen duleedka Magalada Dhuusamareeb Ciidamada Nabadsugida Galmudug ay gacanta kusoo dhigeen rag lagu eedeynayo dilkii dhawaan deegaanka Dhan-Waris loogu geystay Afar ruux oo kasoo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Nabadsugida Galmudug ayaa xaqiijiyay in howlgalka ay ka fuliyeen degaanka Habaasweyne ay kusoo qabteen tira maleeshiyaad ah oo ku eedeysan dilka Afarta ruux,isla markaana la geeyay Magalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Saraakiisha Ciidamada mashaacin tirada rasmiga ah ee dadka loo soo qabtay dilkaas,hayeeshee waxaa ay sheegeen in ay baaritaano ku hayaan si Maxkamad loo horgeeyo,isla markaana Cadaaladda la marsiiyo.
Afhayeen u hadlay maamulka Galmudug ayaa dhankiisa sheegay in howlgalkaas uu dhacay xalay Saqdii dhexe,isla markaana Ciidamada ujeedkoodu uu ahaa bartilmaameed ku saabsan in deegaanka Habaasweyne ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkii ka dambeeyey dilka Afarta Ruux ee kasoo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed.
Dhawaan Maamulka Koonfur Galbeed ayaa Maamulka Galmudug ka dalbaday in ay jawaab deg deg ah ka bixiyaan dilkaas,waxana Madaxa Xukuumadda Galmudug uu sheegay inay dadkii ka dambeeyay dilkaas cadaaladda horkeeni doonaan.
Sidoo kale dhowr habeen ka hor ayaa waxaa dil wadareed loogu geystay duleedka Magalada Gaalkacyo 9 ruux oo kasoo kala jeeday deegaanada Koonfur Galbeed iyo hir-Shabeelle,kuwaas oo dadkii ka dambeeyay aan weli gacanta lagu dhigin.